Dagaal Culus oo Gobalka Gedo ka dhacay iyo qasaaraha ka dhashay xog laga helay” | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Dagaal Culus oo Gobalka Gedo ka dhacay iyo qasaaraha ka dhashay ...
Dagaal Culus oo Gobalka Gedo ka dhacay iyo qasaaraha ka dhashay xog laga helay”
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa Dagaal u dhaxeeyay Ciidanka la dagaalanka Argagixisada dalka Kenya iyo xoogaga ururka Al-shabaab, kaasi oo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay Gobolka Gedo.
Dagaalkan oo si gaar ah uga dhacay degaanka Xirsi-guur oo 45-KM ujira Degmada Ceel-Waaq ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu ka dhashay Khasaare isugu jira Dhimasho iyo Dhaawac oo labada dhinac ah.
Warar madax banaan ayaa sheegaya kahor inta aanu dhicin dagaalka Diyaarad gaar ah oo ay leedahay Dowladda Kenya in howlo Sahmin ah ay ka sameysay degaanka oo la sheegay iney isku uruursanayeen Shabaab, intaasi kadib ayay Ciidanka Kenya qaadeen weerar.
Saraakiisha Ciidanka Xoogga dalka ee Gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegeen Dagaalkan in lagu dilay ilaa Afar Dagaalame oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab, halka sidoo kale ay jiraan dhaawacyo la gaarsiiyay xubnaha Shabaab.
Waxay kaloo sheegeen Saraakiisha Dagaalkan in Ciidanka Dowladda Federaalka looga dhaawacay Hal Askari, iyada oo khasaare uusan soo gaarin Ciidanka Kenya.
Xoogaga ururka Al-Shabaab wali wax war ah kama soo saarin Dagaalka ka dhacay Gobolka Gedo gaar ahaan degaanka Xirsi-guur iyo warka Saraakiisha Ciidanka oo ah in Dagaalka lagu dilay xubno Shabaab ka tirsan.